Ilali yaseCreekside eBryce 3AB
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguJeana
ULUDWE OLUTSHA LWEBRYCE MOUNTAIN!
Ngaphantsi kweekhilomitha ezi-2 ukusuka eBryce Resort. Ilali yaseCreekside ilawulwa ngokobuchwephesha, ikubonelela ngenkonzo ye-concierge enabasebenzi abanobuhlobo abanokukunceda ukucwangcisa ukuhlala kwakho. Singabandakanyeka ngokuthanda kwakho okanye kangangoko ... Ungangena e-ofisini okanye ufikelele izitshixo usebenzisa ibhokisi yokutshixa.
Unokufikelela kulo lonke ikhaya kunye newasha / isomisi. Iipropane grills zinikezelwe ukusetyenziswa kweendwendwe. Sicela ukuba iigrill zingasetyenziswa kufutshane / ngaphakathi.
Uyilo lwendawo yokuhlala lukumgangatho emibini (A no-B), ikhaya ledolophu, ngokusisiseko iiyunithi ezimbini eziphindaphindweyo zipakishwe. Iyunithi nganye inamagumbi okulala ama-2, iibhafu ezi-2 ezigcweleyo nganye inekhitshi elixhotyiswe kakuhle elinempahla eyaneleyo yokukhonza.
Izikrini ezisicaba kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala. I-TV yesathelayithi eneWifi.
Ezi ndawo zokulala zikunika umbono wokujonga phantsi kuluhlu lokuqhuba lwebala legalufa. Kwakhona, kufuphi neLake Laura, ii-ziplines, imiqolomba, iibreweries, ukukhwela intaba, kunye neendawo zokuthengisa iwayini.
Siyinxalenye ye-31 unit timeshare resort. Yinto entle kakhulu izibini ezininzi kunye neentsapho ezinxibelelana okanye zizenzele ezazo izinto.
Umbuki zindwendwe ngu- Jeana
Sinabasebenzi abaneeyure zeofisi:
NgoMvulo- ngoLwesine 9 AM-5 PM
NgoLwesihlanu- ukungena kuqala nge-3PM (ukufumana ibhokisi yokutshixa kuqala ngo-7PM)
NgoMgqibelo emini- 4 PM
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Basye